Doorashada Ismaamulka Tigree oo maanta loo dareeray - Jowhar Somali news Leader
Home News Doorashada Ismaamulka Tigree oo maanta loo dareeray
Doorashada Ismaamulka Tigree oo maanta loo dareeray
Doorashadii gobolka ismaamulka Tigree ee dalka Itoobaiya ayaa saaka waxaa ka bilaabatay deegaanada uu ka kooban yahay gobolkaasi, iyaga oo iska dhaga tiray baaqa dowladda dhexe ee ah in aan dorashadaasi la qaban karin.
Codbixiyayaasha ayaa waxay aroortii hore ee saaka u dareereen goobaha loo asteeyay inay codeynta ka dhacdo. Xisbiga TPLF -oo gacanta ku hayay siyaasadda dalka Itoobiya muddo toboneeyo sano ah ayaa waxay ku hanjabeen in dhibaatada ay sii baahi doonto haddii dowladda dhexe ay isku daydo inay hor istaagto doorashada.
Rai’sul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa liiday muhiimada ay leedahay doorashadan, isaga oo sheegay in xisbiga TPLF ay haystaan waqti ay xafiiska ku sii joogaan kaasi oo ah go’aan ay gaareen aqalka sare ee baarlamaanka bishii June.
Mr Abiy ayaa sheegay in doorashada maanta dhacayso aysan wax farqi ah ku keeni doonin go’aankii horey loo gaaray ee dib u dhigidda dorashada.
Waxaa uu sidoo kale carabka ku adkeeyay in dowladiisa aysan tallaabo militari qaadi doonin .
“Doorashadu ma aha mid sharci ah sababto ah guddiga doorashada oo kali ah ayaa doorasho qaban kara,”waxaa uu sidaasi Dr Abiy ku sheegay wareysi uu siiyay xalay telefishinka qaranka Itoobiya.
“Aniga waxaan rumeysanahay, in Itoobiya aysan dagaal u baahnayn, ka mid ma ahi dadka doorbidaya tallaabo militari.”ayuu intaa ku daray
Xisbiga TPLF iyo dowladda dhexe ayaa tan iyo intii uu xafiiska yimid Dr Abiy Axmed waxaa u dhaxeeyay muran xooggan.
Shan xisbi ayaa lagu wadaa in doorashada maanta ay ka qeyb galaan, halka kuwa kalana ay qaadaceen.